Umthandazo wabantwana Discover️ Discover Online ▷ ➡️
Ufuna ukufundisa abantwana bakho ukuthandaza kodwa awazi ukuba uqale ngaphi, apha siza kukuxelela Umthandazo wabantwana abanokuzenza kusasa okanye ebusuku ngaphambi kokulala.
1 Kutheni sisenza umthandazo wabantwana?
2 Umthandazo wabantwana
2.1 Umthandazo kwiNgelosi yoMgcini
2.2 KuThixo ndiyaxoka
2.3 Yesu omncinci wobomi bam
2.4 Iikona ezine ezincinci
2.5 Utata wethu
Kutheni sisenza umthandazo wabantwana?
Abantwana bahlala benoloyiko, ngakumbi ebusuku. Eyona ndlela yokubazisa ukuba bakhuselekile kungomthandazo.Njengoko sisiya kuThixo ngamaxesha obunzima, singafundisa abantwana bethu ukuba benze njalo.
Ke ngoko, ukuba umntwana wakho uqala esikolweni kwaye bathethile naye malunga nenkolo kwaye awazi ukuba uza kuwusingatha njani lo mbandela, sicebisa ukuba uqale umfundise inkolo ngomthandazo, yindlela eya kumkhokelela ekubeni amazi uThixo ukusuka kwindlela elula kwaye iya kukugcwalisa ngothando.
Eyona ndlela ilula yokufundisa Umthandazo wabantwana Kulixesha lokulala, ukwenza isiko xa uyokulala unokuziva ukhuselekile kuba ngamanye amaxesha boyika ubumnyama, okanye ukuba kuvela inyoka phantsi kwebhedi okanye into yokuba yedwa.
Kule nqaku sikulethela izivakalisi ezilula nezona ziqhelekileyo ukuba ufundise umntwana wakho ngokuthe ngcembe njengoko ekhula. Siyakumema ukuba ufunde inqaku lethu ku Imithandazo yokubhaptizwa.
Ootata ngumthombo wokholo ebantwaneni
Isiko lokuthandaza, lisusela kwiminyaka emininzi eyadlulayo, lifaka umthandazo ebantwaneni bakho, kufuneka libeyindlela eyonwabisayo kwaye bangayiboni njengembopheleleko okanye ukuzibophelela, ukuba akunjalo njengemfuno kunye nomkhwa wokuthetha noThixo.
Ngexesha lokulala lelona xesha lifanelekileyo, kuba ungayenza inxenye yenkqubo yasebusuku, ngokunxiba iipyjama, ukuxukuxa, ukuthandaza kwaye ekugqibeleni uyokulala. Sikuzisa eyona mithandazo mihle nenentsingiselo ukuze uyenze nabantwana bakho.
Ingelosi engumlondolozi ngomnye wemithandazo ebaluleke kakhulu ebantwaneni, kuba ngalo mthandazo bahlala beziva bekhuselekile kuba ingelosi yabo iya kubagcina ngelixa bengena kwelo lizwe lihle, eli el mundo yamaphupha.
Ingelosi yomgcini, inkampani emnandi,
Musa ukundishiya ebusuku, nasemini.
ude undihlalise ngoxolo novuyo
kunye nabo bonke abangcwele, uYesu, uJoseph noMariya.
Mntwana uYesu uze ebhedini yam,
Koyena mncinci wendlu, ongenakufunda umthandazo omde kangako, sibafundisa ukuthanda uThixo kwezona zinto zisisiseko, lo mthandazo ungenziwa kokubini ngexesha lokulala naxa uvuka.
NgoThixo ndiya kulala, noThixo ndivuka,
kunye neNtombikazi kaMariya noMoya oyiNgcwele.
Yesu omncinci wobomi bam
Kwangokunjalo, kufuneka songeze ibali likaYesu Krestu umsindisi wehlabathi owasikhulula ezonweni, kunye nedini lakhe, ke kufuneka ufundise abantwana ukuba uYesu wayengumntwana olungileyo kwaye uzinikele ekuphulaphuleni ilizwi likaThixo.
UYesu omncinci ebomini bam, ungumntwana onjengam,
Thats why ndikuthanda kakhulu
ndikunike intliziyo yam.
Iikona ezine ezincinci
Lo mthandazo unokukhapha ingelosi engumlondolozi, abo bantwana boyika ukulala bodwa, ngaphambi kokuba ulale ungathandaza kunye nabo ukuze bazive ukuba ubusuku bonke baya kuba nengelosi yabo ebalindileyo kunye neengelosi ezine ezincinci zibajongile kwinkampani yeNtombikazi enguMariya.
Ibhedi yam ineekona ezine,
Iingelosi ezincinci ezine ezindigcinela zona,
kunye neNtombikazi enguMariya.
Umthandazo ekufuneka wonke umKatolika awazi nguMthandazo weNkosi, kuba sisebancinci abazali bethu basifundisile kwaye bawuphinda lo mthandazo. Nabantwana bakho ungayifunda kancinci kancinci kwaye yonke imihla ukongeza ngaphezulu, bade bakwazi ukuyithetha igqibelele.
Bawo wethu osemazulwini,
Malingcwaliswe igama lakho.
Mabufike ubukumkani bakho.
Makwenziwe ukuthanda kwakho nasemhlabeni, njengokuba kusenziwa emazulwini.
Siphe namhlanje isonka sethu semihla ngemihla,
sixolele amatyala ethu ngokunjalo
siyabaxolela abo basonileyo.
Musa ukuwela ekuhendweni,
Ngokulandelayo, lo mthandazo uyinto encedisayo kubo bonke abanye, akufuneki sishiye bucala uMoya oyiNgcwele, kufuneka sazise abantwana bethu ukuba ukhona kwaye ungumkhonzi kaThixo emhlabeni.
Uzuko kuYise nakuNyana
Njengoko kwakunjalo ekuqaleni,
ngoku kwaye rhoqo,
Ngale ndlela, abantwana bakho baya kuba nakho ukuqonda intsingiselo yeNkosi yethu uThixo, kunye nentsingiselo yesivakalisi ngasinye, ke baya kuba nakho ukuqonda okungakumbi malunga nenkolo kunye noyilo lukaThixo.
Kwangokunjalo, xa uthandaza nabantwana bakho, wenza ubudlelwane obukhethekileyo, abathi njengokuba bekhula bazive benokuzithemba ngawe, baya kucela ingcebiso yakho kwaye baya kukunceda, kuba baya kuziva besondele kuwe. Ke xa kufikwa kwixesha lokulala, ngabo abaya kukukhumbuza, mama / tata, lixesha lokulala, masithandaze, kuba iyakuba lelona xesha balithandayo emini.
Abazali baya kuba ngabo baya kunceda abantwana babo ukuba banxibelelane noThixo. Ngokulandelayo, njengoko bekhula, unxibelelwano lwabo luya komelela ukuya kumda wokuzenzela imithandazo kunye nokubulela uThixo ngeentsikelelo abazifumeneyo. Abantwana ukuba bathandaze imithandazo yabo ngexesha lokulala baya kuphulukana noloyiko lwabo bobabini ubumnyama kunye nokuba yedwa kumagumbi abo.